Geelle oo mar 5aad noqday Madaxweynaha Jabuuti | KEYDMEDIA ONLINE
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Jabuuti soo hogaaminayay tan iyo 1999, waana Madaxweynihii 2aad oo dalka Jabuuti yeesho wixii ka dambeeyay xoriyadiisa 1977.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudiga doorashadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqay in Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku guuleystay codbixintii ka dhacday shalay dalkan dhaca geeska Afrika, isagoo helay codad aqlabiyad leh.
Geelle oo 73 jir ah wuxuu ka guuleystay hal Musharax oo la tartamay ganacsade Zakriya Ismaaciil Faarax, kaasoo u noqday Musharax malxiis ah oo looga tala-galay inuu ka dhigo tartanka mid qaab dimuqraadi ah u dhacay.
Natiijada lagu dhawaaqay ayaa muujinaysa in Geelle uu helay 98.58%, halka uu Musharax maqaar-saarka ah Zakariye uu helay 5,000, oo u dhiganta 1.59%, taasoo ka dhigaysa in dalka Jabuuti aan ka dhicin doorasho xor iyo xalaal ah, oo si siman loogu tartamay.
"Waad ku mahadsantihiin kalsoonida aad i siiseen, aan meel uga soo wada jeysano horumarka Jabuuti," ayuu Geelle ku yiri qoraal kooban oo Twitter-ka soo dhigay.
Dad gaaraya 215,000 oo qof oo kamid ah shacabka dalka Jabuuti oo hal milyan lagu qiyaasay ayaa codeeyay doorashadda uu Madaxweyne Ismaaciil Geelle mar 5aad ku guuleystay.
Xisbiyada Mucaaradka ayaa qaadacay ka qeybgalka doorashadda Jabuuti, iyagoo sheegay inaysan dhacaynin codbixin xor iyo cadalaad ah, oo dhinacyada ku wada qanci karaan.
Geelle ayaa kamid ah madaxa ugu mudada dheer ee Afrika, oo kursiga laga fujin la'yahay, wuxuuna dalka Jabuuti ka sameystay boqortooyo illaa uu ku dhimanayo isaga maamulayo.